Nhau - Mazuva ese kuchenesa uye kugadzirisa erabha rollers
Kuchenesa kwemazuva ese uye kugadziriswa kwemabhaudhi erabha
Iyo inochengetedza nguva uye yakakodzera mazuva ese yeanilox roller inogona kuwedzera hupenyu hwebasa, kuwedzera kushandiswa, uye kuunza mabhenefiti akakura.
1. Mutsva mupumburu unomhanya-mukati
Kunze kwekunge iri yekupedzisira sarudzo, usashandise matsva anotenderera ekuratidzira akakosha mirairo. Kunyangwe gwaro reanilox rave kuita deburring, kupolisha uye mamwe maitiro usati wabva mufekitori, uye yanga isati yatangwa, inogona kudzikisira kupfeka kwekutsvaira panguva yekushandisa, asi izvi hazvireve kuti kukosha kwekumhanya-mukati panguva yekushandisa iyo nyowani roll inogona kufuratirwa Bonde. Kana iro gwaro nyowani rangoiswa pamushini, riite hanya naro panguva yakakodzera. Kana paine mitsara, mira uye pukuta iyo inotsvaira munguva. Muzhinji mamiriro ekushanda, kuomarara kwezvimedu hakuna kukwana kukonzera kupfeka kweanilox roller, asi hazviratidzwe kunze kwekuti zvimwe zvidiki zvakaoma zvinokanganisa madziro mesh pasi pechiito cheanokwenenzvera kuti agadzire madiki zvedongo machipisi akasungwa pamupendero unopinza, hapana kana imwe chete. Iwo mashifts akakwana kukuya irreparable groove mamaki, uye mune zvakakomba kesi, iro roller muviri unozobvamburwa. Ichi zvakare ndicho chikonzero nei vashandisi vachiwanzo kugunun'una kuti matsva matsva anowanzo tenderera kumatambudziko kupfuura ekare ma roller. Kazhinji, mushure memasvondo maviri nemaviri ekuenderera uchimhanya-mukati, zvichingodaro, chidziro chidziro hachinyanye kunetseka nekukanganiswa kwenzvimbo dzakaomarara mushure mekukanganiswa neinki, chipenga chechiremba, uye ndiro roller.
2. Vhara pasi kugadzirwa
Kana muchina ukamira kwenguva pfupi, rollerlo inoda kuramba ichitenderera. Kana muchina ukavharwa kwenguva yakareba, anilox roller inoda kupatsanura iyo inotsvaga munguva, kusunungura irabha kumanikidza roller, uye kuchenesa iyo inoyerera ingi, kuti udzivise kuenzana kweinki munzira yakatwasuka kana kunetsa kuchenesa iyo inki inki yakaomeswa.
3. Scraper pamwe
Yakakwira-mhando inotsvedza chinhu chakakosha kuverengera ruzivo rwekushandisa iyo anilox roll. Kuomarara kwekumusoro kweanokwenenzvera kunofanirwa kuve kwakakodzera, kwete kuomarara zvirinani. Chimiro chemucheto wekucheka chinofanira kunge chakakodzera uye chenjerera kutsiva.
4. Ink yekuchenesa
Inki yakachena ine kukosha kwakakosha mukudzivirira kukwenya pane anilox roller.
5. Ink kurodha kuona kweanilox roller
Kunyangwe hazvo zvedongo roller zvine hurefu hwakaoma uye hupenyu hwakareba hwebasa, dzinozoperawo sezvo nguva yekushandisa ichiwedzera. Nekuda kweizvozvo, iyo inotakura inki inokwana anilox roller zvishoma nezvishoma inoderera pamwe nekuwedzera kwenguva. Naizvozvo, kana iwe uchida kuitisa yakaenzanisirwa uye yakazara manejimendi yeiyo anilox roller, iwe unofanirwa kugara uchiona chaiyo inki inokwana yeanilox roller.
Sezvo kuwanda kwebasa iri kusingade kuve kwakawandisa, zvakare sarudzo yakanaka yekuisa iri basa kune anilox roll mupi.
· Anilox roller inofanirwa kuchengetwa munzvimbo yakaoma mumba kudzivirira kuti isakanganiswa nehunyoro, mvura kana zuva.
· Paunenge uchitsiva iyo anilox roller, chengetedza chinotenderera pamusoro kudzivirira kukuvara kwekurovera. Paunenge uchichengeta, shandisa pasuru yakagadzirwa neakasikwa fiber kuputira roller.
· Paunenge uchichengeta, gadzirisa roller pane rakakosha bracket, uye usaise roller pasi pasi zvisina kukwana.
· Kana uchifamba, zvinodikanwa kupfuudza misoro yemiseu kumacheto maviri eiyo roller pane iyo roller nzvimbo kuti udzivise kukanganiswa uye kukuvara kwekurovera.
· Mushure mekudhinda kana kupfeka kwega kwega, pamusoro peiyo roller inofanirwa kucheneswa munguva kuti isarambe iri inki kana kupfeka slurry yakasara pasi pezasi mesh kuti iome uye ivharike.
· Kazhinji shandisa mesh maikorosikopu kuti uongorore, uye tora matanho anoenderana kana kupfeka nekuvharika kukawanikwa.
Usapfuure-kumanikidza chinokanganisa nekugadzirisa huwandu hwekuchinjisa, izvo zvinowedzera zvirinani kuvezwa kweiyo anilox roller uye inotsvaira.
Usatenderedza roll yakaoma yeanilox ichipesana nachiremba.
Unofanirwa kuseta kumanikidza kweanodzvanya nguva dzese paunogadziridza, uye kumanikidza kusiri iko kuchakonzera zvidimbu zvidimbu.
Mira kushandisa chinokwenenzvera icho chakapfuura kupfeka kwakanyanya, tanga maitiro ezuva nezuva ekutarisa kupfeka kwechinhu chinokasira, uye kudzora kusakara kwechakatsetseka zvakanaka.
Chengeta icho chinotsvedza chakafanana neicho chinotenderera nguva dzese, uye chienzanisa nguva nenguva.
· Usashandise yakaderera inki uye unhani slurry.
· Bvisa guruva pamusoro pechinhu chakadhindwa kana yakavharwa substrate usati wadhindisa kuti irambe yakachena.
· Shandisa chaiyo mesh kudzika uye kuvhura reshiyo.
01. Kukanda mutsara
Kuongorora kwechikonzero: Chikonzero chekwakakwenya pamusoro peiyo ceramic anilox roller ndechekuti iwo madiki madiki akaomeswa akasanganiswa muinki. Kana chiremba chipande ichikwenya inki, zvidimbu zvidiki zviri pakati pechiremba nenjodzi inoisa roller zvedongo pamusoro. Tunhu tudiki diki twakaoma twunogona kuuya kubva kumasimbi akadonhedzwa nachiremba chipande kana pombi yeingi, yakaoma yakaoma inki, kana kusviba.
Isa firita uye magineti chinogadzika muingi yekupa system kuti ubvise dzakasakara kana dzakachekwa simbi
Simbisa kuchenesa kwezvikamu zvese zveingi inki sisitimu yekudzivirira kugadzirwa kweakaoma ingi
· Paunenge uchishandisa kamuri yakarembera banga reingi, panofanirwa kuve neingi yakaringana inoyerera nepavhu, kuti iyo inobvisa igadzwe zvizere uye ibvise mabraded script particles.
02. Kusakara kusakara
Kuiswa kwetsvina hakuna kuenzana uye simba harina kuenzana
· Iyo inokwenenzvera yakanyanyisa-kushushikana kana kuti isina kukwana mafuta
· Iyo mhando yeiyo ceramic layer haina kusvika padanho
· Gadza zvinyoronyoro uye gadzira chisviniro usati waiswa
Nyatsochenesa banga rekubata uye lining banga
· Natsiridza mhando yeiyo zvedongo layer
03. Yakavhara mesh
Kuongorora kwechikonzero: iro rekuchenesa basa kana iyo anilox roller ikashandiswa kumusoro haikwane nguva uye haina kukwana
Cherechedza kuchenesa mesh ine maikorosikopu yakakodzera
Simbisa kuchenesa kweanilox roller mushure mekudhinda
04. Kukuvara kwemuviri
· Kunangana kwakananga nezvinhu zvakaomarara kunokonzera kukuvara kweceramic layer
Nzira isina kuchena yekuchenesa uye kusarudzwa kwemabhuku zvinokanganisa madziro
Simbisa pfungwa yekutarisira kudzivirira tsaona dzemakina
· Kana isiri-yemuchina yekuchengetera, pfeka pabutiro rinodzivirira repatani roller
· Kunzwisisa kwakadzama kwehunhu hwenzira dzakasiyana siyana dzekuchenesa, sarudza nzira yekuchenesa yakakodzera, tamba zvizere kuzvakanakira nzira, uye dzivisa matambudziko anogona kukonzerwa nenzira
Verenga mirairo yekuchenesa midziyo kana zvekuchenesa zvakadzama, uye sarudza mashandiro avo nemazvo
05. Kuora nekutsvaira
Kuongorora kwechikonzero: Izvi zvinokonzerwa nekuora kwezvinhu zvepasi kweiyo anilox roller, iyo inokonzeresa pamusoro peiyo anilox roller kukotama, uye mune zvakakomba zviitiko, inotokonzeresa maceramics emuno kudonha.
· Paunenge uchirongedza zvedongo anilox rollers, ndapota ratidza mashandisiro enharaunda yeanilox roller. Kana iri yakasimba asidi uye yakasimba alkali nharaunda, iyo inogadzira inoda kusimbisa iyo anti-ngura maitiro matanho.
· Shandisa simbi isina ngura senge roll roll zvinhu
Dzivisa kushandiswa kwesidhi yakasimba uye alkali makemikari ekuchenesa ekuchenesa anilox roller
Nzira dzazvino dzekuchenesa anilox mipumburu dzinogona kukamurwa muzvikamu zvinotevera:
1. Shandisa yakakosha anilox roller yekuchenesa mumiririri, ine simbi brashi kana nano chipanje pakuchenesa online.
2. Shandisa iyo yekuchenesa yekuchenesa muchina ine yakakosha yekuchenesa mumiririri yekuchenesa.
3. Kumanikidza mvura yekuchenesa
4. Laser kuchenesa.
· Brashi yesimbi, nano chipanje
Zvakanakira: inonatsa kuchenesa, hapana disassembly uye gungano, yakapusa mashandiro, kunyatsochenesa, hapana michina, uye yakaderera mutengo
Kukanganisa: Yakakosha alkaline yekuchenesa solvent inodikanwa. Kune vamwe vakasindimara inorganic zvinhu, mhedzisiro haina kunaka sekuchenesa kwe ultrasonic.
· Kumanikidza mvura yekuchenesa
Zvakanakira: Zvine hukama nharaunda uye zvakachengeteka, zvine yakanaka yekuchenesa maturo.
Kukanganisa: Mutengo wemidziyo wakakwira. Muzviitiko zvakawanda, zvichiri kudikanwa kushandisa solvent kunyorova iyo ceramic anilox roller usati watanga kumanikidza-kumanikidza mvura kuchenesa, uye kuchine mari yekushandisa.
Zvakanakira: Hapana mashandiro emaoko anodikanwa, uye mhedzisiro yekuvharika kwekusindimara iri pachena.
Kukanganisa: 1. Midziyo yacho inodhura, uye zvekuchenesa zvinonyungudutswa zvichiri kudiwa mukuwedzera kune iyo michina;
2. Iyo ultrasonic paramende kutonga inoda kunyatsoita, uye zvinodikanwa kuti uongorore nenzira kwayo kuvhara kweanilox roller uye kupa mushonga wakakodzera, zvikasadaro zvinogona kukonzera kukuvara kune anilox roller;
3. Iko kushandiswa kunoda kugara kwakaderera frequency. Kugara uchishandisa ultrasonic yekuchenesa iyo anilox roller inokuvadza mesh madziro uye inokanganisa zvakananga hupenyu hweiyo anilox roller.
· Kuchenesa Laser
Zvakanakira: Iyo yekuchenesa mhedzisiro ndiyo yakanyanya kuchena uye yakakwana, kushandiswa kwesimba kwesimba, hapana zvimwe zvinoshandiswa zvinodiwa, hapana kukuvara kune anilox roller, uye inogona kucheneswa online pasina kubvarura iyo anilox roller, kunyanya yakakodzera kuchenesa hombe anilox roller.
Kukanganisa: Iyo michina inodhura kwazvo.
Imwe neimwe nzira yekuchenesa ine zvayakanakira nezvayakanakira, uye maitiro ekuisarudza inoda kutemerwa nekambani yekudhinda zvinoenderana nemamiriro ayo.
Kunyangwe iri nzira yekuchenesa, acidic yekuchenesa vamiririri uye kusiyanisa tembiricha uye hunyoro zvinhu zviviri zvinowanzo kufuratirwa zvinhu izvo zvinoita kuti anilox roller iputike. Inofananidzwa nenzvimbo yealkali, iyo acidic nharaunda inowanzo shatisa iyo substrate pasi peiyo ceramic layer. Naizvozvo, kana iwo mamiriro ekushanda iri acidic yekushandira nharaunda, inofanirwa kudomwa pamberi nemugadziri kana uchigadzirisa, kuitira kuti mwero unoenderana wekurwisa-ngura kurapwa kuitwe. Pamusoro pezvo, ruzivo rwakaratidza kuti mune dzimwe nzvimbo dzemusangano dzine tembiricha yakanyanya uye hunyoro uye munzvimbo dzemusangano dzinoshandisa zvakawanda zvinogadziriswa, rukoko rwemvura yakanyoroveswa runogadzirwa zviri nyore pamusoro pechinyorwa cheanilox. Inofanirwa kupukutwa munguva panguva yekuchengetera nekuchengetwa mushure mekuomeswa. Iyo yakacheneswa anilox roll inofanirawo kuomeswa usati wapinda munzvimbo yekuchengetera.
Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa,